ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အမေ့အိမ်သို့အပြန်
အမေ့နောက်မှ ခါးကိုဖက်ထားတာ ကလေးလေးကျနေတာပဲ။
ပူပန်ခြင်းကင်းစွာ အမြဲထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်ကိုမောင်မျိုး
အလှူအကြောင်းဖတ်ရတာ အရမ်းဝမ်းမြောက်မိတယ် သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ရင်း ကုသိုဟ်ပါယူသွားပါတယ်။ အမေနေကောင်းတာသိရလို့လဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်မောင်မျိုးရေ။
အမေနေကောင်းတာ သိရ မြင်ရလို့ဝမ်းသာတယ်
အလှူလေးကို တွေ့ ရလို့ကြည်နူးတယ်
နောက်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ကျွေးနေတဲ့ မုန့် ဟင်းခါး စားချင်သွားတယ်...
အမေ .. အမြဲနေကောင်းပါစေ...
နောက်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ကျွေးနေတဲ့ မုန့် ဟင်းခါး စားချင်သွားတယ်... (me too)
အရမ်းကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါခင်ဗျာ။ ကိုမျိုးအမေ နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကြည်နူးဝမ်းသာ ပီတိ ထပ်တူကျမိပါ၏။
အမေ့ကို ဂုစိုက်တာ လေးစားဒယ် မောင်မျိုး..
ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုနဲ့ အမျှ ပေးတဲ့အတွက် ၀င်းသာပီတိဖြစ်မိပါသည် (မျက်ရည်များပင် တစ်ကယ်ကြီးဝဲတာ)
စိတ်ချမ်းသာဖွယ် အလှူလေးပဲ။ ဝါးတီးဆွဲနေကြတာ သားရေတောင်ကျလာပြီ။ နောက်လည်း ဒီထက်မက လှူနိုင်ပါစေဗျာ။ မောင်မျိုး အဘနဲ့ အမေလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။တကယ် .....
ဆွမ်းကျွေးနေတဲ့ပုံတွေကြည့်ရတာ တကယ်ကို ပကာသနမပါဘဲ ရပ်ရွာဓလေ့ရဲ့ ရိုးသားတဲ့အရိပ်အငွေ့တွေဘဲ တွေ့ရတယ်
မောင်မျိုးအမေ ကျန်းကျန်းမာမာ သက်တော်ရာကျော်ရှည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ပီတိဖြစ်လိုက်တာ မောင်မျိုးရေ ... ။
ဓာတ်ပုံတွေကို သဘောကျလွန်းလို့ ပုံကြီးချဲ့ပြီး ကြည့်နေတာ။ မုန့်ဟင်းခါးလေးက ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ စားချင်လိုက်တာနော်။ နောက်တခါ အလှူလုပ်ရင် ဆြာလေးကိုပါ ဖိတ်ပါကွယ် :P
တိုက်ပုံနဲ့က အဖိုးလေးလား။ ဘေးနားက ဦးလေးကြီးတယောက်က လိုက်ပွဲတောင် ထပ်ထည့်နေတာဆိုတော့ မုန့်ဟင်းခါး တော်တော် ကောင်းလို့ ဖြစ်မယ်။ နောက်ဘက်က စင်ပေါ်မှာ ငါးဆင့်ချိုင့်ကြီးတွေ တင်ထားတာ မြင်တယ်။ အလှူက အပြန်ကျရင် အိမ်ပါသယ်လို့ ရမှာပေါ့နော်။ :))
ဖွားလေးတို့ဝိုင်းနဲ့ ရွာက ဧည့်သည်တွေဝိုင်းကလဲ အားရပါးရ စားနေကြတာပဲ။ မမြင်ရတာ ကြာတဲ့ ဘီးဆံပတ်တွေ ဆံထုံးလေးတွေရယ် တဘက်လေးတွေ ပတ်ထားကြတာရယ်က တကယ့် မြန်မာ့ကျေးလက် ဆန်တဲ့ မြင်ကွင်းကလေးပဲ။
ကာလသားတို့ ၀ိုင်းကလဲ မိုက်တယ်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး အပြတ်အားပေးနေကြတာ။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကာလသားပိစိကလေးကလဲ ပါသေး။ :)
ကလေးတွေဝိုင်းက ကလေးလေးတွေ မျက်နှာမှာ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကျားလေးတွေနဲ့ မြင်ရတာ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ကလေးတွေလဲ စားနိုင်ကြသား။ ပန်းကန်ထဲမှာ ကုန်ခါတောင်နီးနေပြီ။ ပျော်စရာကြီး။
နောက်ဆုံးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ မနာလိုဘူးဟေ့ ...
သူ့အမေကို ကပ်ချွဲနေတဲ့ ဖိုးချွဲကလေး။ ပဲကလဲ များလိုက်တာ ၀င်းဦးပြုံးသလို မခို့တရို့ ငါးခူအပြုံးလေးနဲ့ ... :))
အဲ .. ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မေ့တော့မလို့ ... အလှူအတွက် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ မောင်မျိုးရေ ... ။ ကုသိုလ်တွေဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လဲ ဒီထက်လှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေ။
ညီ အခုတလော ပျောက်နေလို့ ရွာပဲ ပြန်သလားလို့ တွေးနေမိသေး တယ်ဗျ၊ အမေ နေမကောင်းဘူး ဆိုတာတော့ မသိလိုက်ဘူး၊ အခု ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာပြီ ကြားရလို့ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ၊ တကယ်ပါ၊ မိဘတွေအတွက် အဝေးရောက် သားသမီးတွေက ဘယ်လို စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်၊ ပကာသန မပါဘဲ မုန့်ဟင်းခါး အပြတ်အားပေး နေကြတဲ့ ပုံတွေကို သဘောကျတယ်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ မပါဘဲနဲ့..၊ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံချင်းစီ ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ မမေလိုပဲ ကျနော် ပြောချင်တာလည်း တထပ်တည်းပါပဲ၊ နောက်ဆုံးက အမေနဲ့သား ပုံကတော့ အမိုက်ဆုံးပဲ...။း)
မောင်မျိုးက သားလိမ်မာလေးဘဲ။ အမေဆိုတာ သားသမီးကို မြင်ရရင် ရောဂါတစ်ဝက်အလိုလို ပျောက်ပြီးသား။ ဆေးခန်းကိုပါ လိုက်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ ရှိတဲ့ ရောဂါတွေ အကုန်ပျောက်ပြီပေါ့။
လှူပွဲ ဧည့်ခံပွဲတွေ ကြည့်ရတာ သဘာဝအတိုင်းဘဲ။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဒါပေမဲ့ မောင်မျိုးအမေကို ဖက်ထားသလို ကျနော်ကတော့ အမေကို မဖက်ဖူးဘူး။ အမေ့အသားထိဖူးတာတောင် အမေဆုံးခါနီးလေးမှ နဖူးလေးစမ်းကြည့်ပြီး ထိဖူးတာ။ အခုလို သားအမိပုံကို မြင်တွေ့ရတာ စိတ်ထဲ အတော်လေး ကြည်နူးမိတယ်။
ဒီလိုရွာဓလေ့လေးတွေမြင်ရတာ ရင်ထဲအေးချမ်းလိုက်တာ... မောင်မျိုးအမေကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်... သားအမိနှစ်ယောက်ပုံလေးက ကြည်နူးစရာ
မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်စွာ မြန်မြန်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ။
ရွာမှာအလှူလုပ်တာ အရမ်းကောင်းတာဘဲ စားနေတာ
အားရပါးရရှိလိုက်တာ၊ ဓါတ်ပုံတွေကြည်.ပြီး အမလည်း
စားချင်လိုက်တာ။ မောင်လေးအမေ ကျန်းမာပါစေလို.
ငမျိုး . . မိဘရိပ်ဆိုတာ အကိုတို့အတွက် အရမ်းအေးမြ အမြဲတောင့်နေရတဲ့ မေတ္တာရိပ်မြုံလေးပါ . . . ငါညီ ကိုယ့်မာတာမိခင်နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးမြင်တော့ . . . အကို အမေ့ကိုပိုပြီး သတိရမိပါတယ် . . . .း)
အမေ ကျန်းမာလို့ ၀မ်းသာတယ် မောင်မျိုး..
ဓတ်ပုံအချို့ နှစ်သက်လို့ သိမ်းထားပါရစေ..
အဲ့ထဲမှာ အေးကြည်မ များ ပါလေမလား.. :))
အမေ နေကောင်းတာမြင်ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အလှူ၊ ရွာနဲ့ မိသားစုတွေက ဝမ်းသာကြည်နူးစရာလေးတွေ..
စစချင်းဖတ်တော့ ငိုချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ် .. ဖတ်ရင်းနဲ့ အပျော်တွေ ကူးသွားပြန်ရော .. ခုလို နေကောင်းပြီကြားလို့ ၀မ်းသာတယ်ဟေ့ ..း)
နင်ပြန်သွားတော့ နင့်အမေပျော်နေမှာပဲ .. ဖြစ်နိုင်ရင် မကြာမကြာ ပြန်ပေးဟာ .. အဖေနဲ့ပုံကျ မတင်ဘူး ..း) ပုံတွေတင်ဦး စိတ်ချမ်းသာလို့ .. :D
မိဘ နှစ်ပါးလုံး နေကောင်း၊ ကျမ္မာပါစေလို့စုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သာဓု၊ သာဓု ၊ သာဓု ပါရှင်
အမတွေလည်း မပါဘူး။ မောင်နှမပုံတွေ ရော ရိုက်မလာဘူးလား?
ကျန်တာတွေက သူများတွေ ပြောသွားဘီ :D
သြော် ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းလေးတွေ မြင်တော့ အိမ်ကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်....:):)
သြော်.ကိုကြီးမျိုးပျောက်လှချည်လားလို့..မတွေ.တာကြာပြီ။ အိမ်ပြန်သွားတာကိုး..နေမကောင်းတဲ့အမေ့ကိုပြုစုခွင့်ရလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ အကိုရယ်။ အမေနေကောင်းပြီလုိ့ကြားရတာလဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။း)
အမေတွေက သားတွေကို ပိုချစ်တတ်တယ်...
အမေအတွက် စိုးရိမ်ပြီး ပြန်သွားတာလား...
ဒါကြောင့် ဒီတလော ပျောက်နေတာကိုး...
သားလိမ္မာလေး မောင်မျိုးပြန်သွားတော့ အမေဖြစ်သူ ရောဂါတဝက် သက်သာသွားမယ်ထင်တယ်...
ဆရာလည်း အမေ့ကို ပြန်သတိရသွားတယ်...ညီမ ဆရာဝန်က အမေ့အနားမှာရှိနေလို့ ကျန်းမာရေးကိုတော့ စိတ်မပူရပေမယ့် မောင်မျိုးက ကိုယ့်အမေကို ဖက်ထားတာမြင်ရတော့ တစ်ခါမှ အမေနဲ့ဖက်လဲတကင်းမနေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာလို့ပါ....
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါခင်ဗျာ အစ်ကိုမောင်မျိုး အမေ အမြဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ညီငယ် 8Yar ဆုမွန်ပြုပါတယ်။ ရွာကပြန်လာပြီဆိုတော့မုန့်လေး ဘာလေးပါလာဘူးလားဗျာ။ :P
မောင်မျိုးက အမေတူလေးပဲ...း)).. ဖတ်ရင်းနဲ့ တကယ်ကို စိတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်နူးမိပါရဲ့..း))
ဖတ်ရတာ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ အိမ်နဲ့ အမေ့ကို သတိရမိပြီး လှိုက်ခနဲတောင် ဖြစ်မိတယ်။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ညီ။